ILuz-Isizukulwana soCoceko-ukubala ukuya eBukumkanini
INkosi yethu uYesu Kristu ukuba	NguLuz de Maria de Bonilla nge-10 kaMeyi, 2021:
Abantu bam: Yamkelani intsikelelo yam; Vumela uthando lwam lungene ngamandla ngaphakathi komnye nomnye kuni, bantwana bam. Usisizukulwana sohlanjululo. * Ndiyakukhokela ngokusisigxina ukuze ungalahleki ngenxa yesiphithiphithi sokuba abo bazinikele ebubini bahlala behlwayela abantu baM. Ikatechon yam, ** Ithetha ukuthini “katechon” incwadi yesibini kaPawulos eya kwabaseTesalonika?
1. UKatechon Ligama elisetyenziswe ngumpostile uPaul Paul ukuchaza umqobo othintela ukubuya komchasi-Kristu [okt. "Isithinteli"]. Abaseki beCawa, kubandakanya no-Saint Augustine, bawutolika lo mqobo (ubuncinci kwinxalenye) njengobukhosi baseRoma apho iBandla latshutshiswa lada labulawa (29 - 476 AD). “Le mvukelo okanye ukuwa kuqondwa ngokubanzi, ngooTata bakudala, ngemvukelo yobukhosi baseRoma, eyaqala ukutshatyalaliswa, ngaphambi kokuza kuka-Antichrist. Kusenokwenzeka, mhlawumbi, kuqondwe ngemvukelo yamazwe amaninzi kwiCawe yamaKatolika, esele iyinxenye esele yenzekile, esebenzisa uMahomet, uLuther, njl njl. woMchasi-Kristu ”(umbhalo osemazantsi we-2 kwabaseTesalonika 2: 3, IBHAYIBHILE EINGCWELE, IBaronius Press Limited, 2003; iphe. 235).
Ngokunxulumene noku, ekubeni uPaul uPaul ebhekisa kule restrain kwisimelabizo esithi "yena," abanye bacinga ukuba oku kungabhekisa "kwilitye" likaPeter ngokwakhe: "UAbraham, utata wokholo, ulukholo ethintela isiphithiphithi, isikhukula esitshabalalisayo sentshabalalo, kwaye ngaloo ndlela sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuba uYesu unguKrestu… , Ukubizwa kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, UAdrian Walker, Tr., Iphe. 55-56)
2. U-Saint Paul ubhengeza ukuza kwe "ndoda yobugwenxa" ngokugqwesa, oya kuthi ngamaxesha okugqibela aziphakamise ngaphezulu kwayo yonke into kwaye "azimise njengoThixo", esongeza ukuba "imfihlakalo yobugwenxa sele isebenza" ehlabathini.
3. Nangona kunjalo, imiqondiso yangoku, ezecawa, ezepolitiko nezezoqoqosho zisibonisa ukuba "imfihlakalo yobugwenxa" iyasebenza kula maxesha-ngalo mzuzu siphila kuwo. Ukomelezwa ngabantu baM abathembekileyo, kungumqobo kwizicwangciso zokungeniswa kwehlabathi kurhulumente wexesha elizayo esele ikhokelwa nguMchasi-Kristu.
Ungalahleki ngaphakathi kwimo yakho yobuntu. Owona mqobo mkhulu kuninzi lwabantu baM ngeli xesha bubumfama bokomoya. Ulindele ntoni? Uza kubuyela njani kwixa elidlulileyo xa ujamelene nokubandezeleka okuhlala kusiza kwaye kuhamba? Musa ukuchitha eli xesha; phucula, uphonsa ubuntu bomntu, obuhlala lukhobokisa ukucinga kwakho, enzonzobileni. Yeka ukukholelwa ukuba ungoyena ulungileyo, wazi yonke into kwaye abantakwenu noodadewenu abanakulunga! Kwanele kwezo "ngcwaba zifihliweyo" (Mt 23: 27) ezinyanyekayo ngaphakathi ngenxa yomntu ozaliswe bubuxoki! Asilolwazi olunika usindiso emphefumlweni, okanye ukungazi okukukhokelela kum. Udinga ulungelelwaniso lokomoya kunye nokholo kum, ukanti endaweni yoko uyaqhubeka nokuqokelela ulwazi kubantu abangafezekanga.
Abantu baM bathi bayandithanda ngaphandle kokuguqulwa ngaphakathi ... Bathi bayandithanda lo gama bephethe amadlavu agulisayo asulela wonke umntu osecaleni kwabo… Nithi ningabantwana bam, ukanti ndibona iijaji ezininzi, oozwilakhe, abo benza intshabalalo , abo baphanga uxolo kubantakwabo noodadewabo… Aba asingobantu baM; Abantu bam ngabantu abandithandayo “ngoMoya nangenyaniso” (Jo 4:23), abathanda, abahloniphayo nabanceda abazalwana noodade wabo. Baninzi kakhulu abagwebi phakathi kwaBantu baM abathi, benomoya wokuzingca, bahlala phantsi ngasekunene kwam nangasekhohlo kwam ngaphandle kwemvume kaThixo, belibele ukuba “nabani na ofuna ukuba mkhulu makabe ngumkhonzi wabo bonke” (Mt 20: 17), hayi umgwebi wabo bonke.
Shumayela ukungxamiseka kwenguquko, kwenguquko, yokusondela koMthetho wam wenceba eluntwini: Isilumkiso. Ukukhanya: Iziprofeto malunga nesilumkiso esikhulu, funda… Izixhobo zam zishumayela ngokungxamiseka kokubuyela kwaBantwana bam endlwini yam ekukhanyeni kwezilingo ezinkulu ohlala kuzo nezizayo, eziza kuba nkulu. Musa ukuthandaza kum usoyika: ndiyinceba kwaye ndibamkela bonke abo beza phambi kwam.
Banele abo banenkani abanekratshi, abangatshintshi batshone eludakeni lwabo! ICawe yam ivavanywa- kuvavanywa kakhulu kangangokuba uhamba ngendlela engeyiyo… Umthetho wam mnye: awuguquki, awunakuguqulwa… Ndinguye izolo, namhlanje, nangonaphakade (Heb. 13: 8)...
Mthande uMama wam kwaye nithandaze nimanyene naYe oqokelela abantwana bam kumhlambi omnye. Hlanganisa noMama wam ngoMeyi we-13 Isikhumbuzo sokuvela kweFatima ngothando, ukuzinikela, kunye nenjongo eqinileyo yokuguqula.
Thandazani, bantwana bam, iLizwi lam alifanelanga kugqwethwa ukulungiselela izinto zomzuzwana.
Ndiyakumema ukuba uthandaze ngamandla malunga neCalifornia: iyakushukuma
Ndikubiza ukuba uthandaze: amagunya athabatha indlela yemfazwe evulekileyo.
Thandaza ngokuzazi: uguquko kufuneka lwenzeke ngoku, ngaphambi kokuba kube semva kwexesha!
Bantu bam abathandekayo, buyelani kum niguqukile ngokupheleleyo, nithandane: “Lowo ungenasono makaphose ilitye lokuqala” (Yoh 8: 1-7) Uthando lwam aluqondakali kwisidalwa esingumntu. Buyela ngokukhawuleza, kuba usuku lunokufana neyure. Uthando Lwam lukulinda.
UYesu Wakho Onenceba.
* Ekucocweni kwesi sizukulwana:
Isibini kwisithathu sehlabathi siphelile kwaye elinye icala kufuneka lithandaze kwaye lenze imbuyiselo ukuze iNkosi ibe nosizi. UMtyholi ufuna ukulawula ngokupheleleyo phezu komhlaba. Ufuna ukutshabalalisa. Umhlaba usengozini enkulu… Ngale mizuzu lonke uluntu luxhomekeke kumsonto. Ukuba umsonto uqhawukile, baninzi bayakuba ngabo bangafikeleli kusindiso… Khawuleza kuba ixesha liphelile; Akuyi kubakho ndawo yabo balibazisayo ukuza!… Isixhobo esinempembelelo enkulu kokubi kukutsho iRosari… -Inenekazi lethu kuGladys Herminia Quiroga waseArgentina, livunyiwe nge-22 kaMeyi, ngo-2016 ngu-Bishop Hector Sabatino Cardelli
Isinye kwisithathu ndiza kusizisa emlilweni; Ndiya kubasulungekisa njengalowo esulungekisa isilivere, yaye ndiza kubavavanya njengowavavanywa ngegolide. Baya kunqula igama lam, ndibaphendule; Ndiya kuthi: 'Bangabantu bam,' bona bathi: 'UNdikhoyo nguThixo wam.' (Zek. 13: 8-9)
"UThixo uza kuwucoca umhlaba ngokuhlwaywa, kwaye inxenye enkulu yesi sizukulwana iya kutshatyalaliswa", kodwa [uYesu] uyangqina ukuba "izohlwayo azisondeli kwaba bantu bafumana isipho esikhulu sokuphila ngokuthanda kukaThixo". UThixo "uyawakhusela kunye neendawo ahlala kuzo". —Isicatshulwa esivela Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, Mfu. UJoseph L.Iannuzzi, STD, Ph.D
Ngoku sifike malunga nesithathu samawaka amabini eminyaka, kwaye kuyakubakho uhlaziyo lwesithathu. Esi sizathu sokudideka ngokubanzi, nto leyo enye into ngaphandle kokulungiselela ukuhlaziywa kwesithathu. Ukuba kuhlaziyo lwesibini ndibonakalisile okwenziwe luluntu kunye nokubandezeleka kwam, kwaye kuncinci kakhulu kokufezekiswa kobuThixo bam, ngoku, kolu hlaziyo lwesithathu, emva kokuba umhlaba ucociwe kwaye inxenye enkulu yesizukulwana sangoku sitshatyalalisiwe ... oku kuhlaziywa ngokubonakalisa okwenziwa bubuThixo bam ngaphakathi koluntu lwam. —UYesu waya eLuisa, kwidayari XII, nge-29 kaJanuwari 1919; Ibid. umbhalo osemazantsi n. 406
Kuba uThixo eyigqibile imisebenzi yaKhe, waphumla ngomhla wesixhenxe, wawusikelela, ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu bonke ububi bumele bupheliswe emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka… -UBawo weCawa, uCaecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), Amaziko obuThixoUmqulu 7.
Indlela "uMhla weNkosi" okhokelwa ngayo yile "Ukuhlanjululwa": funda Umhla wezoBulungisa kwaye Ukuphumla kweSabatha okuzayo.
Ukusuka eSt. UMichel Rodrigue:
Ukugqwetha nokunyelisa abantu ngokuchasene noThixo nangokuchasene nobomi, ngazo zonke iindlela zayo, kwandile ukuya kwinqanaba lokuba ukucoceka ngoku kube yimfuneko. -Bona "Isilumkiso, iMbandezelo, kunye neCawa engena engcwabeni", yobuntunkingdom.com
** Ukufunda okunxulumene nefayile ye- ikatechon okanye umbambisi:
Ukuza okuzayo kweMelika
Amagqabantshintshi kaLuz de Maria:
INkosi yethu uYesu Krestu iyasiyala malunga noMthetho wothando- Uthando lwaKhe. Usimema ukuba sithandazele ikatechon yakhe, hayi ikatechon, kodwa ikatechon yakhe. Oku kufuna ukuba sibonise kwaye sibeke phantsi isimo sengqondo sokuzingca esingasivumeli ukuba senze ngokwezicelo zikaKristu. La magama okugqibela: "usuku lungathi lufane neyure", lusifake ekucamngceni okungxamisekileyo, sikhumbula ukuba embonweni wandibonisa iwotshi, okokuqala ngezandla neeyure, emva koko ngaphandle kwezandla okanye iiyure. Ngesi sizathu, lowo usilumkisayo ngexesha eliseMandleni aKhe, usivumela ukuba siqonde phakathi kwale migca ukuba oko kubonakala kukude kusondele kunokuba sicinga. Masiguquke, masibe ngabathunywa malunga nemfuneko. INkosi yethu uYesu Krestu yandivumela ukuba ndibone umbono woluntu uthathwe wothuswe kukuqhuma kwentaba-mlilo. Uninzi lweentaba-mlilo lwasebenza kulo mbono sade sangena ebumnyameni obenziwe luthuthu kunye neegesi zezo mlilo. Abantu bazivalela kumakhaya abo kuba umoya ungcolisiwe kwaye unobungozi. Kwakukho isiphithiphithi.
Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, undibonisile ukuba iiKwayara zeeNgelosi zakhe zakha njani umgca obambe iigesi, kodwa hayi umlotha. Babemisa iigesi ukuze zingagulisi abantu baKhe abathembekileyo. Wathi kum: Sithandwa sam, uncedo lweeKwayala zam zeengelosi ngelo xesha luyakufana nemana endiya kuyithumela kubantu bam abathembekileyo. Kwaye endisikelela ngoxolo lwaKhe entliziyweni yam, wemka.
Ithetha ukuthini “katechon” incwadi yesibini kaPawulos eya kwabaseTesalonika?
3. Nangona kunjalo, imiqondiso yangoku, ezecawa, ezepolitiko nezezoqoqosho zisibonisa ukuba "imfihlakalo yobugwenxa" iyasebenza kula maxesha-ngalo mzuzu siphila kuwo.
Ukukhanya: Iziprofeto malunga nesilumkiso esikhulu, funda…
Isikhumbuzo sokuvela kweFatima
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo, Isikhanyiso seSazela, Iintlungu zabasebenzi, Ixesha le-Anti-Christ.
← UGisella - Alisekho ixesha
UGisella - Kungekudala, uMchasi-Kristu →